“Shaqaaaha Dowladda loo Qaadanayaa waa Dadka Ka soo Baxay Shaqo Qaran”
Hargeysa (Dawan)- Xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ayaa shaacisay in hannaanka shaqaalaha dawladda loo qaadanayo wax ka bedel lagu samayn doono, isla markaana shaqaalaha dawladda ee la qaadanayo muhiimadda koobaad la siinayo ardayda soo martay barnaamijka shaqo qaran ee uu dhawaan curiyey madaxweynaha Somaliland Md, Muuse Biixi Cabdi.
Agaasimaha barnaamijka shaqo qaran Maxamed Xuseen Mu’aadinka ayaa sheegay in dowladdu ay shaqaale u qaadanayso dhallinyarada ka soo baxda barnaamijka shaqo qaran, waxaanu yidhi “Cid danbe oo shaqo si dadban loo qorayaa ma jirto, waxa shaqada dowladda loo qadanayaa keliya dadka ka soo baxay barnaamjika shaqo qaran, albaabka keliya ee laga soo gelaayo shaqo gelinta dowladda ama ciidanka waxa uu noqonayaa qofka soo mara barnaamijka shaqo qaran, waxaana la siinayaa shahaado iyo mudnaan gaar ah.” ayuu yidhi isaga oo waraysi gaar ah siinayey HCTV.
Maxamed Xuseen Mu’aadinka ayaa faafahin ka bixiyey dulucda barnaamijka iyo tirada dufcada kowaad ee loo qaadanayaa barnaamijka shaqo qaran, waxana uu yidhi “Barnaaamijkan oo dufcada kowaad ay ka qayb qaadan doonan 1500 oo dhallinyarada jaamacadaha ka baxday ah waxa uu qorshihiisu yahay in dhallinyarada Somaliland ee jaamacadaha ka soo baxda muddo sannad ah ay qaatan tobabar carbis iyo shaqo qaran ah. Muddada sannadka ah waa laba qaybood saddex bilood wiilasha waxa lagu xaraynayaa xarunta carbiska sarakiisha ee dararweyne, gabdhuhuna waxay joogi doonan gobollada.”
Ugu danbayntii Agaasimaha barnaamijka shaqo qaran waxa uu sheegay in deeqaha waxbarasho ay mudnaanta kowaad siinayaa dhallinyarada ka soo baxda barnaamijkani, waxana uu yidhi “Deeqaha waxbarasho ee aynu ka helno dowladdaha, heerka labaad ee waxbarashada waxa mudnaanta yeelanaya dadka soo maray barnaamijka shaqo qaran.”